Miomàna, emoji vaovao mihoatra ny 150 no ho tonga amin'ny fahavaratra ho avy | Avy amin'ny mac aho
Ary ny hoe ny emoji dia toa tsy misy fetra ary manodidina ny 150 ny emoji vaovao vonona hanomboka amin'ny macOS, iOS ary sehatra finday hafa. Manaraka ny Unicode 11. Ny tsirairay amin'izy ireo dia azo jerena mivantana ao amin'ny emojipediafa
Ao amin'ny macOS dia ananantsika ihany koa ny Safidy hidira azy ireo avy hatrany amin'ny hitsin-dàlana fitendry izay efa navoakanay taloha kelin'izay tadidintsika herinandro vitsivitsy lasa izay. Mazava ho azy fa ireo emoji vaovao azontsika jerena anaty horonantsary aorian'ny fitsambikinana dia tsy misy izao, fa ho avy tsy ho ela.
Ity ny horonantsary fanangonana ny sasany amin'ireo emoji vaovao 150 mahery izay ho tonga tsy ho ela amin'ny rafitra fiasanay:
Ny sainam-piraty, ny endrika mangatsiaka, ny mena, ny sola, na ny volondavenona aza no mpandray anjara amin'ity fanangonana emojis vaovao ity izay tsy ho ela ho azon'ny mpampiasa rehetra, marina fa maro amin'izy ireo no efa tavela anio, saingy Tsara hatrany ny hoe ampiana emoji vaovao matetika matetika, sa tsy izany?
Miaraka amin'ny sticker na GIF lamaody indrindra izay mitombo, marina fa maro amintsika no tsy mampiasa emoji intsony toy ny tamin'ny voalohany, saingy miharihary fa ilaina amin'ny toe-javatra maro izy ireo ary rehefa manana fitaovana fanampiana fitendry miaraka amin'ny hitsin-dàlana ihany koa izahay tsara kokoa hatrany izy ireo. Ny lisitr'ireo misy dia hitombo amin'ity fahavaratra 2018 ityKa andao hankafy azy ireo toy ny ataontsika amin'ny GIF na ny sticker sticker malaza indrindra izay ampiasaina hanomezana dikany hetsika nefa tsy mila manoratra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Miomàna fa mihoatra ny 150 ny emoji vaovao ho avy amin'ny fahavaratra ho avy izao